ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်: ကျွန်မလေ... ခုတလော..!!
ဗေဒင်ဆရာမလေးဟောသွားတဲ့ လတ်တလော အခြေအနေ နှလုံးလမ်းကြောင်းမှာ ကျွန်း.. ကျွန်းတွေ ခံနေတဲ့ ကိစ္စ.. အဲ့ဒီထက်ဆိုးတာက အသက်လမ်းကြောင်းကြီးက စွတ်ရှည်နေသေးသတဲ့.. ကဲ.. စဉ်းစားသာကြည့် ကျွန်းတွေ ခံနေပြီး အသက်ကြီး ရှည်နေရမယ့် ဒုက္ခ..။ ကျေးဇူးပြု၍ ဓါးထက်ထက်လေး တစ်လက်လောက် ငှားကြပါလား.. (ကြောက်ပါနဲ့) လက်နှစ်ဖက် ဖြတ်များပစ်ရင် ကောင်းမလား တွေးမိရုံလေးပါဆို.. အဟက်..း)
2009 July 30th မနက်က (ထုံးစံအတိုင်း မဟုတ်ပဲ) ဘာလို့များ ရေမြန်မြန် ချိုးခဲ့မိပါလိမ့်..!!
တကယ်ဆို အားရပါးရ အကြာကြီး ချိုးခဲ့သင့်တာ..း(
ဆရာဝန်ကပြောတော့ အိုကေ.. ဒါပေမဲ့ မျက်လုံးတွေ ကောင်းတော့ဘူး ထင်တယ်..
ဘာပဲ ကြည့်ကြည့် ဝေဝေဝါးဝါး.. မျက်လုံးထဲမှာ ဘာရည်တွေမှန်း မသိ ပြည့်ပြည့်နေ၏..။
တံတားအကြီးကြီး တစ်ခုကို လှမ်းမြင်နေရတဲ့ အမြင့် တစ်နေရာ..။
ဘူးသီး ငါးပေါင်းကြော်တွေ..းP
အချိန် သတိပေးသံ တချို့..။
ညီမလေး ဝမ်းနည်း အားငယ်နေရော့မယ်
မမ သနပ်ခါးသွေးပြီး လိမ်းပေးမယ်
စုတ်ဖြဲခံလိုက်ရတဲ့ စာလေးတစ်စောင်နဲ့ ကိုယ့် မျက်လုံးတွေ..
ပန်းနုရောင် သွားပွတ်တံလေး တစ်ချောင်း
ရောက်လာမယ့် မနက်ဖြန်တွေကို ကြိုပြီး မေ့ပစ်နေမိ..
စားပွဲတစ်လုံး ခုံနှစ်လုံးပဲ ရှိတဲ့ အခန်းတစ်ခန်း
အားလုံးသိတယ်.. ပြောစရာ မလိုတော့ဘူးပဲ..
ပြုံးပြနိုင်သေးတဲ့ ကိုယ့် နှုတ်ခမ်းလေး..
မေမေ့ BIG HUG..
နေရောင်ခြည်.. မိုးစက်.. နှင်းပွင့်တွေကို............. ခွင့်..
ဘာလို့....... ဘာအတွက်....... ဘာကြောင့်.....
ဆံနွယ်လေးတွေ ဖွာလန်ကျဲနေတယ်..း(
ချစ်တဲ့ မနော် Tag ထားတာလေးကို ရေးလိုက်ပါပြီနော်..
အချိန် 10:27 AM
ဟဲ့...ကောင်းလို့ ရေးနိုင်တာပေါ့ ငနာကောင် ( မစောင့်နိုင်ဘူး ကိုယ့်ဘာသာဖြေလိုက်တယ် )
ဟီးဟီးဟီး.. နှက်တေးတေးယေးတစ်တောင် ချစ်ချင်တယ်တဲ့ ...
တစ်.. တစ်.. တူး.... တစ်.. တစ်.. တူး..း)..း)..းD
တီငယ်....ရေမြန်မြန်ချိုးလိုက်တော့ ဘာဖြစ်သွားလဲဟင်... နေမကောင်းဘူးလား ၊ မျက်လုံးကို ဂရုစိုက်နော်...။
မမခင်လေး ကျမ်းမာရေး ဂရုစိုက်နော်။
မမကိုချစ်လို့ မမခေါတလု လာဖတ်တယ်။
ဦးနော် ခေါတလုတော့ ဖတ်ဖူး။ ဦးနော်က မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါလို့။ဟိဟိ
တစ်ကြိမ်တစ်ခါ လဲ ရင် အကြိမ်တစ်ရာထပါတဲ့..
ချစ်တဲ့ ညီမလေး..နဲ့ တို့တွေအားလုံး
လေးငယ်ရေ့့့ 
အလိုအပ်ဆုံးက လုလုနဲ့ အတူတူပဲသိလား။
ဦးနော်၊ လေးငယ်နဲ့ ကလေးလေးတို့မိသားစုတွေ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်။
ဘူးသီးငပေါင်းကြော်ဆိုတာ ဂျပန်စာလား တရုတ်စာလား...
မမ တီငယ်း)
မျောက်မျောက်လို့ ခေါ်တဲ့ တီငယ့်ကို လွမ်းတယ်
မျောက်မျောက်ရေ... ဆိုပြီး အားပေးတတ်တဲ့
သိမ့်ခဲ့တဲ့ တီငယ်... တီငယ် တစ်စုံတစ်ခုကြောင့်
တစ်ခုသော အမည်မသိ အကြောင်းကြောင့်
မျောက်မျောက်တို့နဲ့ဝေးနေတဲ့ အချိန်မှာ တီငယ့်ကို
တီငယ်ပြုံးအောင် မပြောနိုင်တဲ့ အတွက်
ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် ဒီအမတွေ အကိုတွေကို
သတိရလိုက်ပါ မျောက်မျောက်ရယ်လို့ ပြောတဲ့
တီငယ့်စကားလိုပဲ ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် မျောက်မျောက်
ချစ်တဲ့ အကိုတွေ အမတွေ အတွက် အမြဲ ရှိနေ
တယ်ဆိုတာ တီငယ်ယုံကြည်မယ်လို့ မျောက်မျောက်
ဘာဖြစ်ဖြစ် တီငယ် ကျမ်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ...
တီငယ့်အတွက်လက်ဆောင်လေးလဲ ပြီးတော့မယ်...း))))
မျောက်မျောက်နဲ့ တီငယ် ဦးနော် အကြောင်းတွေ
ဘာပြောလဲ ဆိုတာ ဦးနော်လာမေးရင် သားမပြောဘူးနော်
ပြီးရင် စိတ်ဆိုးကြမယ်... စိတ်ကောက်ကြမယ်...
တီငယ် မမရဲ့ အားပေးစကားတွေကို ကြားချင်ပါသေးတယ်နော်... မြန်မြန်ပြန်လာခဲ့...
တီငယ့်ကိုချစ်တဲ့ မျောက်မျောက်ရေးတဲ့ ကော့မန့်လေးဖတ်ရလို့ တီငယ် ပြုံးဖြစ်ရင်
မျောက်မျောက် ဘီးတစ်ချောင်းဝယ်ထားတယ် တီငယ်
ဖွာလန်ကျဲနေတဲ့ ဆံပင်လေးတွေကို ဖီးသင်ပေးဖို့.။။။
ကျနော်လူဆိုးကိုမယုံကြည်နဲ့နော်.. ရှိတဲ့ဆံပင်တွေပါကုန်သွားတယ်...း)))
တီငယ့်ဆန္ဒရှိတဲ့ ရွှေရောင်နေ့ရက်တွေကို မျောက်မျောက်တို့တူတူ ချီတက်ကြမယ်
ဒါကြောင့် ဘာအရည်မှန်းမသိပြည့်နှက်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေအတွက် မျောက်မျောက် ဆေးပေးမယ်
မျက်လုံးထဲမှာ ဘာရည်တွေမှန်း မသိ ပြည့်ပြည့်နေ၏..။
မရေးနေတာက ဘူးသီး ငါးပေါင်းကြော်တွေဆိုတာလည်း တကယ်အားကျမိပါတယ်။
မရွတ်နေတဲ့ကဗျာလေးလို တစ်နေ့ မနဲ့ ဆုံချင်ပါတယ်။
မမ သနပ်ခါးသွေးပြီး လိမ်းပေးမယ်..
(ps တားငယ် တတိရနေဒယ် တီနော်)
တီငယ်..ဘာမှတွေးမနေနဲ.နော်...စိတ်ကိုတတ်နိုင်သမျှ အေးအောင်နေပါ..ညစ်နေတဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားအောင် ဘလော့တွေကိုသာ လည်နေလိုက်နော်...သနပ်ခါးပို.စ်လေးတင်အပြီးမှာပဲ တီငယ့်ပိုစ်ထဲက ကဗျာလေးကို ဖတ်ရတော့ ဝမ်းနည်းသွားတယ်....
မခင်နေကောင်းကျန်းမာရဲ့လား... မတွေ့ဖြစ်တာကြာလို့ သတိရနေပါတယ်ဗျာ...
စကားတွေ မပြောဖြစ်တာလည်း ကြာပါပီ...
ခင်မင်ရတဲ့သူတွေဆိုတော့ မတွေ့တာကြာရင် သတိရနေမိတယ်ဗျိုး...
ကျန်းမရေးဂရုစိုက်နော်. ဘာဘဲကြည့်ကြည့်ဝေေ၀၀ါးဝါး ဆိုတော့ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ဘယ်သူ့ ကိုမှ ပိုက်ဆံမချေးနဲ့နော်။
တော်ကြာ ကိုယ်ချေးလိုက်တာ ပိုက်ဆံကြီးကြီး ပြန်ရတော့ သေးသေးဖြစ်နေမယ်။
နှလုံးလမ်းကြောင်းမှ ကျွန်းခံနေတယ်တဲ့လား။ ဘူရိုဇာနဲ့ ထိုးလိုက်။ အဲကျွန်းကို
နောက် မေမေ့ BIG HUG..
ကိုရင်ကြီး မခင်လေး .. ရောက်စ် ။
နေကောင်း ကျန်းမာတယ်ဟုတ် ။
ပြန်ရောက်ရင် ချက်ချင်းသတင်းပို့ပါ။ ဟဲ ဟဲ။ မအာရတာ ကြာပြီ။ ကိုရင်က Typing အားကြီးနှေးတယ်။ မငယ်ကြီးလောက် လက်မသွက်ဘူး။ ကျနော် ဆုတော့ တောင်းခဲတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုဆုတောင်းချင်နေတယ်။ အဓိကတစ်ခု ကျန်းမာပါနေစေဖို့ပါပဲ။
ခုတလော လေး ဖြတ်ခနဲ တွေ့လိုက်လို့ ပြေးလာတာ။
၁။ မလေးရေ.. ကျွန်းတွေ ဘယ်နှစ်ကျွန်းလောက် ခံနေလဲ ပြိုင်မလား။ အနော်က သောကြာခါးပတ်တောင် ပါသေး။ မလေး လိုချင် အမွေပေးမယ်လေ။
၂။ ဘာရည်တွေမှန်းမသိတာတွေ ခပ်ထုတ်လိုက်လေဗျာ။ နော် မလေး။
၃။ ဘူးသီးငါးပေါင်းကြောက အနော် သိပ်ကြိုက်ထာဗျ။ ကြော်ကျွေးပါ မလေးရေ..။
၄။ အနော်က အမြင့်ကြောက်တယ်။ မလေး ရောက်နေတဲ့ နေရာ လာမလည်တော့ဘူး။
၅။ ကြိုက်နေမိတဲ့ ကဗျာလေးက သဘောကျစရာ။
မဝေးလှတဲ့တနေ့တွေ အမြန်ဆုံး ရောက်လာပါစေဗျာ။
၆။ ငှက်တေးတေးလေး ဆို ၀တ်ရည်စုပ် တဲ့ ရောင်စုံ ငှက်လှလှလေးလားး။ ပြေးမြင်မိတယ်။
၇။ စာလေးတစ်စောင်က မုန်တိုင်းများစွာ သယ်လာလေသလားးး မလေးရယ်။
၈။ အသားမဲမှာစိုးလို့ နေရောင အထိမခံတာများးး
၉။ အမေံကိုောတ့ အမြဲ လေးစား ချိးကျူးလျှက်ပါဗျာ။
၁၀။ ဒီတောက ကြမ်းတယ်။ သားရဲပေါတယ်။ ဒါပေမဲ့...
၁၁။ ရွှေရေင်နေ့ရက်တွေ အမြန်ဆုံး တောက်ပလင်းလက်ပါစေ။
၁၂။ စွဲလန်းနေမိတဲ့ အိမ်အပြန်လမ်း အကြောင်းလေးး သိချင်လိုက်ထာဗျာ။
၁၃။ ဘာလို့၊ ဘာကြောင့်၊ ဘာအတွက်ရယ် မသိပေမဲ့ ဘယ်လို ဘယ်ပုံ ဘယ်သို့ ကို ရှာနေမိတယ်ဗျာ။
အနော်တို့ရဲ့ မလေးက ဆံနီယ်လေးတွေ ဖွာလန်ကျဲနေလဲ အပြုံျးွှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ (အရမ်း အရမ်း) လှနေမယ် လို့ သိနေတာကိုပါဗျားး။
မလေးရေ.. အမြန်ဆုံး အဆင်ပြေ ပျော်၇ွှင်ပါစေ။